Francisco Madeira waa Dana-Shisheeye Jire Qaswade ah, Waana in Dalka laga Qabtaa: Sabab? - Muqdisho Online
Home Wararka Francisco Madeira waa Dana-Shisheeye Jire Qaswade ah, Waana in Dalka laga...
Francisco Madeira waa Dana-Shisheeye Jire Qaswade ah, Waana in Dalka laga Qabtaa: Sabab?
Wakiilka Gaarka ah ee Guddoomiyaha Midowga Afrika (SRCC) ee Soomaaliya iyo Madaxa AMISOM, Dana shisheeye Jire Francisco Madeiraayaa ku milmay dowladda NN, waxaanu ka mid yahay shakhsiyaadka biilka joogtada ka qaata xafiiska RW Kheyre, iyadoo loo marsiiyo Samira Axmed Geyd. Francisco Madeira waxaa aad ugu dadaalayaa in la burburiyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda Federaalka.
RW Xasan Cai Kheyre oo ay xiriir dhow leeyihiin Francisco Madeira ayaa waxaa uu ugu tagay dhuusamareeb kadib markii kheyre u yeertay besha caalamaka oo dhan si loogu muujiyo reer Galmudug inay beesha Caalamka ay Kheyre la safan tahay, hasa yehsee dhammaan wakiilladii kale waa diideen inay dareenkaas u gudbiyaan bulshada Galmudug.
Samira Axmed Geydh oo ah la taliyaha Xasan Cali Kheyre, isla mrakaana saaxiib dhow la ah xaaska Kheyre, maaha gabadhan Cusub ee hadda baraha bulshada wareegeysa ee waa xaaskii deganeyd Kenya, oo ay Samira isku dal (kenyaan), iskuna shaqo ah oo u wada shaqeeya Nabadsuggidda Kenya ayaa gacanta ku haysa Madeira. Samira iyo Francisco Madeira oo waligood aad ayey isug dhowaayeen, oo xataa dalka Ugandha ayaa hadda ka hor dacwad ka gudbisay taas oo keentay in laga eryo shaqada Amisom, ayaa hadda waxay xoog uga shaqeysaan in Madeira uu ku xernaado Xasan Cali kheyre, kuna kaalmeyo sidii loo burburin lahaa Maamul Goboledyada. Iyadoo waliba la leeyahay Kheyre waa musharax 2020/21 oo waxay la sameynayaa sheekadaa Putin iyo Madiev oo ah inay isku wareejiyaan xukunka oo marka uu mid noqdo RW kan kalana uu MW noqdo.
Haddii aad si dhow ugu fiirsatid khudbadahiisa beryahan Xasan Kheyre waxaa uu ku jiraa olole doorasho, khudbadaha laga soo minguuriyey madaxdii hal abuurka lahaa, isla markaana codkarka ahayd ee sida Xasan Sheekh iyo Obama iyo Aamusnaanta Farmjo ayaa kuugu filan sida wax loo rabo. Kheyr Madaxweyney, Farmajo RW oo ah wax laaga duceysto.
Xog ay heleyso MOL ayaa waxay sheegeysaa si loo dhaawaco sharafta Axmed Madoobein kooxda NN ee uu horkacayo mid ka mid ah musharraxiinta Madaxweynenimada Jubaland oo ay dhabarka soo wada taabatay dowladda NN, Cabdirashiid Xiddig ay qoreen waraaq been abuur ah oo ay ku sheegayaan inay ka timid ‘Goaha wadatashga iyo Toosinta Jubaland”, kaas oo ah magac laga sameeyey internetka si loogu marin habaabiyo reer Jubland iyo Somalida inteeda kale.
Dan Shisheeye jire Francisco Madeirawaa shakhsiga kaliya ee shir loo dhan yahay oo ay beesha caalamka dhowaan ka yeesheen xaladda sii murgeysa ee Somaliya oo wada joogaan wakiillada beesha caalamka ka codsaday in si xoog leh cadaaddis la saaro Maamullada Somaliya ka jira dhammaantood oo ay ku jiraan Puntlad iyo Somaliland si lo hoos geeyo dowladda Fedraalka. Hasa yeehsee wakiillo isaga ka miisaan culus ayaa Dan-sheeye Jire Francisco Madeira ku aamusiyey in haddiiba cid culeys la saarayo inay tahay dowladda Fedraalka oo ay tahay inay u hogaansantodistuurkaay ku timid.
Dan shisheeye Jire Francisco Madeirawaxaa uu joogto uga helaa dhaqale ku aadan hurinta xaaladaha Somalida dhexdeeda, taas oo ka timaada xafiiska RW kheyre oo hadda u soo jeestay inuu ka soo takhaluso Galmudug, isku soo diro Puntland, fogeeyo Somaliland, carqaaladeeyo habsami u socodka doorashada Jubaland oo xelligaan ku dhow gabagabo.
Haddaba shacbiga Somaliyeed waa inay cadowgooda gartaan inta uu nugul yahay oo la iska qaban karo.
Bal qiyaasa haddii Puntand saaka khilaafka ay hadda la wareegeyso Caasha Geelle oo uu kheyre u dhiibo noqdo halkii ay fidnado kaga bilabana lahayd.
Bal qiyaasa haddii doorashada qaban qaabadeeda Socoto ee Jubaland ay dowladdu inta faraha la gashao kadibna qoryo isugu dhiibto reer Jubaland iyadoo ay hadda dowladda ku ururineyso Gobolka Gedo ciidan beesha Mareexaan ah si ay u taageeraan Abdirashi Xidig oo lahaa ogolaan meyno?
Maxaa dhacaya haddii reer Galmudug shiraraka u socdaa ay ku go’aansadaan inuu Kheyre ka dhex baxo dadkuna ay aayahooda ka tashadaan? Ma Ahlu Sunna ayaa hub loo dhiibayaa si loo burburiyo Galmudug mar kale?
Haddaba Dan shisheeye Jire Francisco Madeiraiyo kooxda uu wataa sow dan kuma qabayaan xaaladaha sii murgaya ee Somaliya oo dhowr sano oo dambe loo saxeexi maayo inuu ka sii qandaraaseyto?
Waxaa la joogaa xelligii uu caqligu talin lahaa oo Francisco Madeira iwm xarkaha loo jari lahaa loogana digi lahaa AU-da inay badasho shakhsigaan ku dhex milmay siyaasadda Somaliya ee dabka ka dhex hurinaya, kalana dullaalaya isagoo la kaashanaya RW dalka.
Previous articleQasnaddii Gobolka Banaadir oo noqotay JEEBKA RW. Kheyre (Caddeyn)
Next articleDiiwan gelinta ciidamada Galmudug oo la joojiyay & Khilaaf cusub